Momba anay - Beijing Sincoheren S&T Development Co., Ltd.
Izahay, Beijing Sincoheren S&T Development co., Ltd, naorina tamin'ny 1999, birao foibe any Beijing, Shina, manana birao any Alemaina, Etazonia ary Aostralia, dia mpanamboatra teknolojia matihanina matihanina amin'ny fitaovana ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana, miaraka amin'ny manankarena. traikefa amin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy.
Manana ny sampan-draharaham-pikarohana sy fampandrosoana, orinasa, sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny varotra, ary foibe serivisy any ampitan-dranomasina izahay, manome ny vidin'ny orinasa Shina mpanjifa rehetra fa eo an-toerana aorian'ny serivisy.
Hatramin'ny nananganana azy 21 taona lasa izay, i Sincoheren dia nanaraka ny fitsipiky ny "mpanjifa voalohany, serivisy voalohany", manome ny mpanjifantsika manerana izao tontolo izao amin'ny vokatra avo lenta sy serivisy super, manome fiofanana maimaim-poana ho an'ny mpanjifa rehetra, ary ny milina rehetra dia hanao manana serivisy sy fikojakojana maimaim-poana aorian'ny varotra, manantena fa ny mpanjifa tsirairay dia ho lasa mpanohana ny vokatray taorian'ny fiaraha-miasa voalohany taminay.
Misaotra anao noho ny fahatokisanao ary nisafidy ny hiara-miasa aminay, manantena isika fa hiara-manao ny raharaham-barotra hatsaran-tarehy mandresy.
Amin'izao fotoana izao, manana orinasa roa isika, ny iray any Beijing, Shina, ary ny iray kosa any Shenzhen, Shina.Ny vokatra rehetra dia novokarina mifanaraka amin'ny fenitra henjana amin'ny fitaovana hatsarana.Ny mpiasa rehetra dia homena fiofanana amin'ny lafiny rehetra alohan'ny hanombohany miasa.
Ny vokatra rehetra dia mahafeno ny rafitra sy ny fenitra kalitao, ny vokatra rehetra dia manana mari-pankasitrahana CE, ary ny sasany amin'izy ireo dia nahazo mari-pankasitrahana US FDA ihany koa.
1. Ny fitaovantsika rehetra dia hanome fiofanana maimaim-poana sy mari-pankasitrahana fanofanana maimaimpoana.
2. Ny mpanjifa dia hahazo boky fampianarana boky fampianarana sy horonan-tsary fanofanana
3. fampianarana fiofanana an-tserasera, ny dokotera klinika fanofanana matihanina dia hanome fanazavana momba ny fiasan'ny fitaovana
4. Door to Door fiofanana eo an-toerana ihany koa dia homen'ny mpampiofana eto an-toerana, na ny mpiasa any ivelany.
Warranty sy aorian'ny serivisy
1. Ny fitaovana rehetra dia manome antoka maimaim-poana 2 taona sy fikojakojana maimaim-poana mandritra ny androm-piainana, ny tsena tsirairay dia hanana injeniera manokana ho an'ny fitaovana tsirairay.
2. eo an-toerana aorian'ny serivisy dia homena any Alemaina sy Etazonia.